Ikhasi Lasekhaya IyafundisaCanticos Bilingual Preschool
Ukufunda izilimi ezimbili okusemandleni namavidiyo, izincwadi, imidlalo nokuningi!
Ukufunda izilimi ezimbili kusezingeni eliphezulu ngamavidiyo, izincwadi, imidlalo nokuningi ngesiNgisi nangesiSpanishi.
I-Canticos, i-Emmy-eqokwe futhi i-brand ewina umklomelo, isebenzisa amandla obuchopho emilolozelo yezingane nezingoma, ukudalula izingane ekufundeni ngezilimi ezimbili kusukela zisencane, lapho sezilungele ukufunda nokwamukela ulimi olusha ngokushesha, kube lula nangaphezulu ngokushelelayo.
Joyina uRicky, Kiki kanye no-Nicky Cocie eCanticos. Ababhalisile bathola ukufinyelela okungenamkhawulo eqoqweni lethu eliphelele lezingoma eziwina umklomelo nama-video ethu adume kakhulu ngezilimi ezimbili nemidlalo, konke kuhlelo lokusebenza olulodwa olunobungane! Iphelele izingane zasenkulisa!
Inconywe yiCommon Sense Media, NBC, Associated Press, People en Español futhi ifakwe izinkanyezi yiKirkus, I-School Library Journal ne-Publisher's Sonto, amavidiyo nezincwadi zeCanticos zithandwa yizingane, abazali nothisha yonke indawo.
"ICanticos ingumkhosi wokugubha izingoma nezindaba izingane eziningi zeLatino ezikhule nazo kule minyaka edlule. Noma kunjalo, isebenza njengesethulo sokuqala semfundo yezilimi ezimbili, futhi inikeza izingane ezincane ithuba lokufunda kanye / noma ukugcina izilimi ezimbili, ngaphandle kwesizinda sabo. ” - Imithombo Yezindaba Ejwayelekile.
"Ama-Canticos asebenza nabazali abafuna ukukhulisa izingane ezifunda izilimi eziningi ngekhwalithi yokuqukethwe ekhangayo." - I-NBC
Wonke amavidiyo we-Canticos Emmy aqokwe ngezilimi ezimbili ahambisana nezangoma
Umklomelo onqobayo kanye nezincwadi ezihlonishwa kakhulu ezilimini ezimbili
Okuhlangenwe nakho okusekelwe ekudlaleni okusiza izingane ukuthi zifunde i-ABC yazo, ukuqwashisa ngo-123 nokuxhumana nomphakathi ngezilimi ezimbili
Imidlalo yokufaka imibala emnandi nokuningi!
Futhi, amalungu athola ukufinyelela emidlalweni yethu emisha, ukukhishwa nokuvuselelwa kuqala.
ICanticos inconywe ngabazali nabezindaba ngokufanayo. Eminye yemiklomelo nezimangalo zamavidiyo nezincwadi zeCanticos zifaka:
I-Sense Media Ejwayelekile: Isisulu Somndeni - Kuhle Imindeni, Izinkanyezi ezi-5 Zenani Lemfundo
U-Emmy: Uphakanyiselwe uchungechunge oluhle kakhulu lwasenkulisa
I-Kidscreen: Imiklomelo emi-2 elandelanayo ye-Best Short Form Preschool Series
I-American Library Association: Umklomelo Wezindaba Wezingane Ophawuleka
Abashicileli maviki onke: Ukubuyekezwa okunenkanyezi kwezincwadi eziningi
UKirkus: INcwadi Yezkukhu Yezingane ezincane kanye nokubuyekezwa okunenkanyezi kwezincwadi eziningi
Ukufunda zasenkulisa ngesiNgisi nangeSpanishi
Izilimi - imiqondo yemfundo yakuqala ngesiNgisi kuphela, iSpanishi kuphela, nezilimi zombili ngasikhathi sinye
Literacy - Imisindvo, tinhlavu, sipelingi, kufundza
Math - Izinombolo, ukubala, nokungezwa
Umculo - Isigqi, ukushaya, ukucula
Amakhono Womphakathi: Ukuphikelela, ubuhlakani, ukuxazulula izinkinga
Ikhono lamasiko: Izilimi ezimbili, ulwazi lwamasiko, isimo esivulekile
Kuthuthukiswe Ochwepheshe, Abafundisayo Nabaculi
Ochwepheshe bemfundo yakuqala abagxile ekufundeni ngezilimi ezimbili
Abadwebi abazuza umklomelo, ama-animators nama-lyricists
Abaculi abaphethe amalungelo obunikazi kanye nezibalo
• Ukufinyelela okungenamkhawulo ekuqoqweni kwethu okuphelele kwemidlalo, konke kuhlelo lokusebenza olulodwa olunobungane
• I-COPPA ne-kidSAFE eqinisekisiwe
• Dlala imidlalo elandwe ngaphambilini ngaphandle kwe-WiFi noma i-intanethi
• Okuqukethwe okukhethekile, kuvuselelwa njalo
• Sebenzisa okubhaliselwe okukodwa kumadivayisi amaningi
• Thola izibuyekezo ezijwayelekile kusuka kwezinhlamvu zakho ozithandayo
• Amalungu athola kuqala ukufinyelela kuyo yonke imidlalo emisha nokukhululwa
• Iphelele izingane ezineminyaka engu-2-5
• Akukho ukukhangisa okuvela eceleni noma ukuthenga okungaphakathi nohlelo kwamalungu
• Yenza isipho esifanele izingane ezinelukuluku
Abasebenzisi abasha bazokwazi ukufinyelela kwisivivinyo samahhala ngesikhathi sokubhalisa! Ngemuva kwesilingo sakho samahhala, ungakhetha ukubhalisa njalo ngenyanga noma ngonyaka (ngesaphulelo esingu-30% ngezinketho zonyaka). Futhi uma uguqula ingqondo yakho nganoma yisiphi isikhathi, ukukhansela kulula ngezilungiselelo zakho ze-iTunes.
Uma udinga usizo, unemibuzo, noma ufuna ukusho 'hi', thintana ku-info@canticosworld.com.
Sifinyelele noma kunini, noma kuphi:
Facebook: ICanticos World
ICanticos inguphawu lokuthengisa lwe-Encantos, PBC. Wonke Amalungelo Agodliwe.
Ethandwa - Iyafundisa
Ethandwa Entsha - Iyafundisa
Grossing Ethandwa - Iyafundisa